18 | May | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
ကို ဗလကြီး – ကျုပ်လေ့လာမိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ကျုပ်လေ့လာမိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ by FB of ကို ဗလကြီး
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမနေ့ကမှဘွားကနဲပေါ်လာသလိုပြောနေသူတွေရှိသလို၊ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းသေသေချာချာအစုံအလင်သိနေသူများလည်းဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဲဒီတော့စာဖတ်နေတဲ့ခင်ဗျားလက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့ဘ၀ထူးခြားလာမှာမဟုတ်တာတော့သေချာတယ်။ အစိုးရကလွှတ်တော်မှာဘယ်လိုငြင်းငြင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ဖိအားကိုလွန်ဆန်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်တာရယ် …. တချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်လူမျိုးစုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကြောင့် …. နောက်ဆုံးတော့အော်ငြင်းနေတဲ့ပါးစပ်တွေညောင်း၊ လက်တွေနာ၊ ဒါတွေပဲအဖတ်တင်မယ်ဆိုတာမြင်ယောင်မိပါ၏။
My 6th. brother SMAR Nyi Nyi’s songs
နောက်သီချင်းတွေနဲ.တုန်.ပြန်မှုတွေ (ဆမား) ညီညီ မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း သစ္စာတေးနဲ.အတူ နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်သီချင်းတပုဒ်နဲ.စစ်ချီသီချင်း ၄ ပုဒ်ရေးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်သီချင်းက Be peace upon our Blood ပါ။အားလုံးမငယ်ရဲ.သံစဉ်တွေပါ။
*Whole Life Is Bloodshed And In Caldesac
How D’ You Think Such A Painful Life
We Can’t Bear, We Must Fight For The Whole Of Our People
*It’s Still Dark But Dawn Start That We Can Sense
Be Prepared For What It Should Be Done
All We Need Is Be Peace Upon Our Blood •
Everything Will Come To All Of Us If All We’re Brave As It Should Be
It Is For Peace ,It’s What We Need Be Peace Upon Our Blood
Archives Select Month June 2018 (1) May 2018 (3) April 2018 (1) March 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (2) July 2017 (3) May 2017 (2) April 2017 (4) March 2017 (1) February 2017 (1) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) October 2016 (1) September 2016 (1) August 2016 (6) July 2016 (4) June 2016 (3) May 2016 (7) April 2016 (2) February 2016 (2) January 2016 (5) December 2015 (6) November 2015 (1) October 2015 (17) September 2015 (9) August 2015 (11) July 2015 (8) June 2015 (9) May 2015 (29) April 2015 (68) March 2015 (106) February 2015 (89) January 2015 (90) December 2014 (111) November 2014 (188) October 2014 (182) September 2014 (135) August 2014 (72) July 2014 (154) June 2014 (49) May 2014 (114) April 2014 (199) March 2014 (338) February 2014 (279) January 2014 (240) December 2013 (159) November 2013 (230) October 2013 (212) September 2013 (185) August 2013 (149) July 2013 (235) June 2013 (198) May 2013 (254) April 2013 (340) March 2013 (233) February 2013 (139) January 2013 (80) December 2012 (109) November 2012 (204) October 2012 (227) September 2012 (118) August 2012 (122) July 2012 (90) June 2012 (167) May 2012 (52) April 2012 (64) March 2012 (32) February 2012 (16) January 2012 (50) December 2011 (19) November 2011 (19) October 2011 (26) September 2011 (30) August 2011 (29) July 2011 (57) June 2011 (28) May 2011 (39) April 2011 (37) March 2011 (23) February 2011 (34) January 2011 (48) December 2010 (96) November 2010 (56) October 2010 (44) September 2010 (37) August 2010 (47) July 2010 (34) June 2010 (20) May 2010 (17) April 2010 (37) March 2010 (21) February 2010 (12) January 2010 (24) December 2009 (14) November 2009 (30) October 2009 (49) September 2009 (24) August 2009 (4) July 2009 (4) June 2009 (6) May 2009 (8) April 2009 (8) March 2009 (34) February 2009 (3)
Thrush or Candidiasis, fungal infection with itchy milk-curd discharge
Rohingya Islamic coins used in ancient Arakan ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ သုံးစွဲခဲ့သည့်ငွေများတွင်အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ကလေမာဟ်တော်ကိုရိုက်နှိပ်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်